Nagu saabsan - Ningbo Milucky Craftwork Co., Ltd.
Ku Saabsan Milucky
Milucky wuxuu ahaa shirkad cusub oo la aasaasay oo ku taal magaalada Ningbo, oo ah magaalo dekedeed, waxay ku taala bariga Gobolka Zhejiang ee Shiinaha. Milucky waxaa loo sameeyay loona maareeyay hoosta Dongming Craftwork Co., Ltd. Ka faa iideysiga warshadda jirta, qalabka, bakhaarka, iyo tikniyoolajiyada Dongming Craftwork Co., Ltd, Milucky wuxuu ku takhasusay soosaarka alaabada PU oo ay kujirto toy squishy toy, squishy toy rooti, ​​caruusadaha xayawaanka lagu ciyaaro ee caruurtu ku ciyaarto, alaabada caruusadda leh ee midabada leh, boombalada xumbo leh ee alaabada leh iyo waxyaabaha kale ee la xiriira PU. Milucky waxay ku adkeyd adeegsiga ashyaa'da ceyriinka ah, agabyada oo dhami kuma xirna oo waxay ku habboon yihiin bey'ada, alaabadayadu waxay waafaqsan yihiin heerarka amniga Yurub, Mareykanka iyo Japan.
Milucky wuxuu raad raacaa tayada waxsoosaarka sare iyo adeegga macaamiisha oo wanaagsan. Waxaan ku fulin doonnaa macaamiisheena shuruudaha alaabada tayo sare leh ee qiimaha tartannada iyo adeegyada ugu wanaagsan. Waxaan si diiran u soo dhaweynaynaa macaamiisha inay soo booqdaan warshadeena oo ay xiriir ganacsi oo muddo dheer nala yeeshaan. Mahadsanid.
Ku saabsan Zhenhai Dongming Craftwork Co., Ltd
Ningbo Zhenhai Dongming Craftwork Co., Ltd, waxay ku takhasustay soo-saarka pu (polyurethane) kubadaha walaaca, PU squishy toy sida toy squishy toys, miro squishy tartiib tartiib ah, squheses jilicsan alaabta ciyaarta, jumbo jilicsan squishy. khibrad hodan ku ah soosaarka boodhka PU, hadda warshadda waxay leedahay qalab horumarsan iyo khadad wax soo saar, awood u leh inay ka caawiso macaamiisha inay horumariyaan sheyga adag isla markaana aqbalaan amarrada OEM.
Ku Saabsan Alaabooyinkayada
Kubadaha walwal ama walax ciriiri ah kaliya maahan kuwa diiqada siiya dadka ka caaya, waxay yihiin xayeysiinta ugu fiican iyo aaladda suuq geynta si loo hormariyo shirkadaada ama astaantaada, ha ahaato dhacdooyinka ganacsiga, soosaarka wax soosaarka, bixinta alaabada ama bandhig, xafladaha xisbiga.